Huddle dia nanamora ny fiaraha-miasa an-tserasera sy ny fizarana rakitra
Huddle: Fiaraha-miasa an-tserasera sy fizarana rakitra
Alakamisy, May 17, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Marty Thompson
Ny famolavolana na famolavolana fampielezan-kevitra amin'ny marketing dia mitaky fitantanana atiny sy sotasota fiaraha-miasa. Matoky aho fa leo anao amin'ny fanovana tsy manam-paharoa amin'ny VPN na fikirakirana firewall hanamorana ny fiaraha-miasa mihamitombo! Ny mety dia mampiasa intranet na SharePoint efa tonta ianao. Mifamadika amin'ny traikefa tsy misy tohiny izay niorenan'ny rahona Huddle Ny sehatr'asa dia manome dia tena hahatonga ny fiaraha-miasa sy ny fitantanana atiny ho traikefa nahafinaritra fa tsy ilay raharaha mandreraka sy manapotika ny sainy ankehitriny.
Nampiasa ny fomba mety, Huddle manana ny fahafahany manolo ny mailaka amin'ny maha-fizarana rakitra sy haino aman-jery fiaraha-miasa azy. Manome safidy malefaka hamoronana, hitahirizana ary hizarana antontan-taratasy, ahafahana manapotsitra papanady na fifanakalozan-kevitra, manamora ny fiaraha-miasa amin'ny hafa amin'ny antontan-taratasy iray ihany raha mitazona kinova na fanovana ary mitantana ny fivezivezena, sy maro hafa. Izy io dia mampiditra saika ny fitaovana fitantanana tetik'asa rehetra, sady mampifandray ny kaonferansa telefaona sy horonan-tsary ary ny fampiharana finday.
Huddle koa dia manolotra an'i Huddle Sync, hanampy anao tantano ny orinasanao manaova rakitra am-pahalalana fa tsy fampifanarahana azy ireo fotsiny. Powered by teknolojia maminavina miandry patanty, dia misafidy ho azy ireo rakitra izay hahaliana anao indrindra.
Haingam-pandeha sy mora ny fisoratana anarana, miaraka amin'ny orinasa mahazo URL Huddle tokana sy pejy fidirana ao anatin'ny minitra vitsy. Avy eo ny mpampiasa dia mametra ny fidirana amin'ny sehatr'asa manokana na amin'ny sehatr'asa tsirairay, mifototra amin'ny adiresy IP isan-karazany na amin'ny alàlan'ny fampiharana ireo safidy alalana granular.
Ireo safidy rehetra ireo dia nanjary tamina fiarovana avo lenta, misy SSL-bit 256, enkripsi fenitra indostrialy, fanaraha-maso SAS70 karazana II ary maro hafa. Ny fahitana feno ny atiny, ny safidy fikarohana mahery, ny fahafaha-miditra amin'ny antontan-taratasy amin'ny fitaovana marobe manomboka amin'ny birao fandefasana ka hatramin'ny telefaona finday Android ary manomboka amin'ny Blackberry ka hatrany Ipads, ampiarahina amin'ilay endri-tsoratra fampandrenesana manan-tsaina izay manintona antontan-taratasy avy hatrany amin'ny fitaovana rehetra, manome antoka fa avo lenta ny fanaraha-maso.
Ireo mpampiroborobo ny Huddle fantaro fa ny habe iray dia tsy mifanaraka amin'ny rehetra, ary manolora safidy maro. Miankina amin'ny safidin'ny tsirairay ny vidiny, ary ny isan'ny safidy mahazatra dia mitentina 10 isanjaton'ny vidin'ny tompony fotsiny. Mandehana amin'ny fitsapana maimaimpoana na mividy mahitsy.
Tags: rakitra fizaranahuddlehuddle syncfiaraha-miasa amin'ny Internet
Maninona ny mpampiasa no miala amin'ny mailakao